Nsonaazụ ọnya cortical na nwata na nkà ọgụgụ isi na mmụta ụlọ akwụkwọ - Cognitive Training
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » Nsonaazụ ọnya cortical na afọ mmepe na nka ọgụgụ isi na mmụta ụlọ akwụkwọ
Ọ bụ ezie na ọ na-anọchite anya ihe dị mkpa kpatara mbibi ụbụrụ n’etiti ndị na-eto eto, anaghị agụ akwụkwọ nke ọma nwata. Ebe ọ bụ na ọ naghị adịkarị, amabeghị ihe banyere ọrịa strok na-emetụta mmepe neurocognitive.
Na mbụ anyị kwuru gbasara otu ricerca duziri site na ndi isi na ndi oru ha; N ’ọmụmụ a, achọpụtara na ndị lanarịrị ọrịa strok na-eche ihe isi ike agụmakwụkwọ karịa karịa ndị ọgbọ ha, ikekwe n’ihi enweghị ọgụgụ isi. Nke a bụ ihe pụta ọ bụ ezie na akara ugo ụlọ akwụkwọ yiri ka ndị ọgbọ, si otú a na-atụ aro mkpa maka nyocha miri emi karị iji chọpụta nsogbu ndị ọrịa nwere ike iche ihu.
Ọmụmụ ihe ọzọ nke Peterson na ndị otu ya duziri gbadoro anya na ụmụaka nwere nsogbu ọnya cortical - akụkụ ụbụrụ tinye aka na ọkwa ọgụgụ isi.
Nnyocha ahụ gụnyere ụmụaka 27 nwere ụdị nsogbu a, na-enyocha ọtụtụ nkọwa dịka oke na ebe ọnya ọnya ahụ dị, yana afọ nke ihe omume ahụ.
Ndị nnyocha ahụ dere na ihe ka ọtụtụ n'ime ụmụaka natara ụfọdụ ụdị nchọpụta uche, dị ka ADHD, nsogbu ịmụ ihe, nchekasị na nsogbu ọnọdụ uche, ma ọ bụ nsogbu asụsụ. N'ezie, nke a agaghị abụ ihe ọhụrụ, dịka akọrọ na ederede gara aga.
Banyere ọrụ ọgụgụ isi, ụmụaka ahụ gbadara ọkwa dị ala karịa ogo na ule ebe nchekwa e nhazi ngwa ngwa - achọtakwala ndị a nyocha a tụlere na mbụ.
Na-atụgharị kama ịnwe arụmọrụ agụmakwụkwọ, nsogbu ndị kachasị mkpa gbasara ngụkọta oge, ebe mmụta ndị ọzọ metụtara agụ, asụsụ na usọrọ nsogbu bụ ihe ndị a na-agaghị emeli.
Ọzọkwa, a na-etinye nyocha nlele anya n'ime otu ụkpụrụ mana akara ule ndị dị na ule dị ala dị ala nhazi moto.
A na-enyocha ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ site na ajụjụ ndị nne na nna ndị ọrịa jupụtara, nke kpughere nsogbu dị na ebe nchekwa na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ike ime atụmatụ na nhazi, yana ntinye na nleba anya n'ihe omume ndị a ga-eme. N'ọnọdụ ọ bụla, a ga-eji nlezianya tụlee data nke ikpeazụ ebe ọ bụ na ha na-esite na nyocha ndị ọzọ karịa nyocha arụmọrụ.
Ebe ha maara ntakịrị ihe nlele ahụ, ndị ode akwụkwọ nyochara nyocha ndị ọzọ na mbo iji chọpụta ma ihe ọ bụla na akụkọ ntolite ezinụlọ nwere ike inye aka ịkọ atụmatụ adịghị ike. Ha si otu a wee hụ na ọrịa strok nke mere na nwata dịkarịsịrị gosipụtara nrụpụta kachasị ukwuu na ntụgharị uche uche na njikọta moto, ebe ọnya na-eto eto “dị agadi” karịrị mpaghara mpaghara niile.
Ọ bụ ezie na ihe ngosi ndị ọzọ dịka ọnya ọnya na ọnọdụ adịghị mma ọ buru amụma, ndị nyocha ahụ chọpụtara na ihe dịka 86% nke ikike dị ala nwere oke ọnya dị ukwuu, ọtụtụ oge na aka nri yana metụtara akụkụ ihu.
Ihe dị ịtụnanya ndị edemede dere bụ na agụmakwụkwọ dị elu nke nne mụrụ nwere ezigbo echiche nkwupụta ụmụaka, yana ọkwa ọgụgụ isi, ọgụgụ okwu na nghọta asụsụ.
Peterson na ndị ọrụ ibe kwubiri na imirikiti ụmụaka ndị rịara ọrịa strok na-enweta, n'ozuzu, ure akara ule dabara na atụmanya maka afọ ha. Agbanyeghị, enwere ọghọm na nchekwa na-arụ ọrụ, ọsọ nhazi ma ọ bụ nhazi ọnụ (nke ikpeazụ, o yikarịrị, n'ihi nsonaazụ nke iji aka kacha arụ ọrụ).
A kọwapụtabeghị ihe ndị ga - ebu amụma ịkọwa ọgụgụ isi ma chọọ nyocha ọzọ tupu enwee ike ịcheta mkpebi ndị doro anya.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Nyocha nke neuropsychological: ọ ga - ekwe omume?
Dịka ọtụtụ ọmụmụ ụdị a, nyocha a na-enyocha nwere metụtara oke usoro dị mkpa dịka ọnụ ọgụgụ dị nta nke isiokwu a na-enyocha, ọnụ ọgụgụ ndị na - eto eto na - eto eto - ihe dị ka 59% n'okpuru afọ 10 - na nchigharị azụ (nke na-achọ data dị adị tupu nke esite na ya wee nweta nkwubi okwu, kama ịlele ihe enwere ike tụọ ya ozugbo ma jiri ya tụnyere otu njikwa ejikọtara maka njiri akọwapụtara).
N'agbanyeghi ihe obula, nyocha a na-arutu aka n'ihe ndi di nkpa n'ihe banyere obere nyocha achoro, ma na-enye echiche ndi kwesiri ekwesiri iji nyocha ya buru ibu.
Peterson, RK, Williams, TS, McDonald, KP, Dlamini, N., & Westmacott, R. (2019). Nsonaazụ ihe ọmụmụ na-esochi ọrịa strok cortical. Journal nke akwara ụmụaka, 34(14), 897-906.
ọrịa strok, ọrịa nwata, ọrịa ọnya na-efe efe
Nsonaazụ ọnya cortical na afọ mmepe na nka ọgụgụ isi na mmụta ụlọ akwụkwọ2020-08-112020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/ictus-infantile-corticale.png200px200px
"Egwuru egwu" ya na ndi isi oru. Ọ na-akawanye ụtọ na ntụrụndụ?Isiokwu, ọrụ ndị isi, ebe nchekwa ọrụ, nwughari, ọgwụgwọ